Analysis Leagoo M8, a phablet maka euro 70 | Gam akporosis
Analysis Leagoo M8, a phablet maka 70 euro
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ na-amasị ọnụ ya na nnukwu ihuenyo ma mmefu ego gi siri ike, ya mere Leagoo M8 es el dispositivo que estás buscando. Y es que ahora es posible comprar el M8 con pantalla de 5,7 pulgadas en resolución HD (1280×720) con protección Corning Gorilla Glass 4 por solo 70 € en oferta Flash durante solo 7 días. Nosotros lo hemos estado probando durante unos días, aquí os pasamos nuestras impresiones sobre el Leagoo M8 nyochaa.
1 5,7 inch ihuenyo
2 Leagoo M8 imewe
3 Processor, ebe nchekwa na nchekwa
4 Batrị, isi ihe ọzọ dị na amara
5 Leagoo M8 njikọta
6 Ahịa na ebe ịzụta
8 Uru na ịzụta
5,7 inch ihuenyo
Obi abụọ adịghị ya, ihuenyo bụ otu n'ime ike nke Leagoo M8 a. Na 2.5 inch IPS 5,7D panel Ọ na-enye mkpebi HD nke pikselụ 1280 x 720. Dị ka ihe mmezi, ọ na-agụnye ma ama Corning ozodimgba iko 4 nchebe na-adịghị hụrụ na niile ọnụ nke a yiri price a Leagoo. Ogo nke ihuenyo a na-anabata, ọ na-agbaso ihe a na-atụ anya ya ma na-enweghị nnukwu ngosipụta karịrị ogo ya.
Banyere ngalaba foto, M8 na-enye anyị a 13 megapixel n'azụ igwefoto na sọrọ Ikanam flash na ihe mmetụta 8 MP n'ihu. Ogo nke ihe mmetụta dị n'elu nkezi maka ụdị ọnụ a ka onye ọrụ ga - enwe afọ ojuju na foto ha. Ọ na - agụnye onye na - agụ akara mkpisiaka onye arụmọrụ ya dị mma ma e jiri ya tụnyere ndị etinyere na ọdụ dị ala / etiti.
Leagoo M8 imewe
Nhazi nke M8 ọ mara ezigbo mmaỌ dị ka ekwentị ị nwere ike ịzụta maka € 68 ma ọlị. Ha osisi bụ nke ọla mgbe azụ ka nke leghaara aluminum i imomi plastic, nke bụ ezie na o doro anya na-emetụ na ọ bụghị metal si a visual si ele ihe anya, ọ dị ka ọ bụ aluminom. Akụkụ ya bụ 15,45 x 7.98 x 0.88 centimeters na n'ọkwa dị arọ ọ na-arịgo gram 224, nke nwere ike ịdị oke oke maka ndị ọrụ na-ejikarị ekwentị amị ...
Leagoo M8 na-abịa na a 6580 GHz 4-isi MediaTek MTK1,3 processor nke ọsọ soro Mali-400 MP GPU. Na ọkwa ncheta o nwere 2 GB nke RAM na 16 GB nke ROM gbasaa ruo 128 GB site na kaadị MicroSD. Nkọwa ndị a anaghị egbutu ma anyị ga-echeta na anyị na-ekwu maka njedebe dị ala maka ọnụahịa ka ha wee yie ka ha ezighi ezi.
N'ezie, ọ bụghị njedebe nke anyị nwere ike ịrịọ kachasị na ọkwa arụmọrụ mgbe ị na-eme egwuregwu dị elu ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ; kama obu ihe nlere anya nke emeputara na-eche echiche nke onye ọrụ nkịtị onye na-eji smartphone maka ọrụ kwa ụbọchị nke anaghị achọ ọtụtụ ihe onwunwe.
Batrị, isi ihe ọzọ dị na amara
Batrị bu 3.500 mAh, nke yana HD mkpebi nke ihuenyo na-enye anyị nnwere onwe na-atọ ụtọ maka nnukwu ngwaọrụ a. Nwee sistemụ arụmọrụ Android 6.0 Marshmallow Ọ na - enyere aka ịgbatị batrị na ọ nwere ike ịnwụ anyị otu ụbọchị na - enweghị nsogbu na iji nnukwu phablet. Enwere ike iwepu ya site na iwepu ihe mkpuchi plastik site na azụ ka ị nwee ike ịgbanwe ya ọfụma ma ọ bụrụ na arụ ọrụ adịghị njọ.
Leagoo M8 njikọta
Leagoo nlereanya na-abịa na Njikọ 3G, Bluetooth, GPS, GSM na Wi-Fi 802.11 b / g / n. Ọ na-etinyekwa Dual SIM, mmepụta jaakụ ọdịyo, oghere kaadi Micro SD na micro USB ụdị C na-akwụ ụgwọ. Naanị ihe anyị na-achọ ijikọ 4G, mana anyị na-agbaghara gị maka ọnụahịa ahụ siri ike.
Para conseguirlo a ese precio tienes una oferta flash que Naanị ụbọchị 7 dị. Ozugbo nkwalite a gafere, M8 ka dị oke ọnụ (ihe dị ka € 80) mana ọ bụrụ na ị ga-azụ ya, ọ ka mma iji ohere a mee ihe.
Uru na ịzụta
3.500 mAh batrị
Ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri
Naanị 2 GB nke Ram
Lee ị nwere gallery zuru ezu nke foto nke Leagoo M8 ka ị wee hụ ya n'ụzọ zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Analysis Leagoo M8, a phablet maka 70 euro
Ọ dị m mma nke ukwuu na enwere ibe dị ka nke a, n'ihi na achọrọ m ịzụta ekwentị a ma amaghị m ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, otu ihe ị na-ekwughị maka ya na m ga-achọ ịma bụ gbasara onye na-ekwu ya, ọ na-ada ka ọ dị elu ka ọ dị obere?
Zaghachi Maria Godino
The Honor V9 bụzi onye ọrụ na ihuenyo QHD, 6GB nke Ram na 3D eserese eserese
Samsung Flow ga-akwado Windows 10 niile